«Fôpla e!» -
16/04/2018 admintriatra Tresaka 0
Tena efa tsy avotra intsony mihitsy ve isika ity sa ahoana e? Toa lany andro manenjika mpitondra kanefa tsy mijery izay ataon’ny tena!
Henatra tsy nisy toa izany ny an’ity fianakaviana iray mba nandefa fonosana lavanila ho an’ny havany tany Frantsa ny sabotsy lasa teo. Novidiany teny amin’ny Pavillon Analakely ireo fonosana lavanila roa, mitentina 40 000 Ar ny iray fonosana. Manitra sady tsara loko mihitsy ireo lavanila tao anaty “sachet” tamin’ny fotoana nividianana azy. Akory anefa ny fahadisoam-panantenan’ireo fianakaviana tany an-dafy rehefa nanokatra ireo fonosana fa lavanila “fôpla” tsy misy ilàna azy no tao anatiny, very fotsiny ny vola 80 000 Ar.
Aiza moa no handroso ny firenena amin’izany toe-tsaina izany e! “Fôpla” daholo izay zavatra ataon’ny gasy, ary tsy mahagaga raha tsy tafavoaka amin’izay sehatra misy azy. Iza intsony ohatra no ‘ndeha hividy lavanila atao fanomezana ao amin’ny Pavillon Analakely, raha tsy hoe angaha vola tsy tiana sy fahafinaretana te hitady fahasorenana? Rehefa tsy misy mpividy intsony dia tsy maintsy hikatona dia hanenjika ny mpitondra ho nampahantra ny tenany.
Ndao hanao fanamby, aiza no misy mpanao taozavatra gasy mba matihanina, izany hoe, mikajy ny asany marim-potoana, tsy mpisoloky, sns. Tsy misy mpanao taozavatra mahafeno ireo fepetra ireo izany intsony mihitsy eto na iray aza, averina indray mandeha hoe “na iray aza”. Dia ho gaga ve isika raha lasan’ny vahiny avokoa ny tsena? Ka “fôpla” daholo raha vao zavatra vita gasy e! Marina fa very vola 80 000 Ar ilay fianakaviana nividy lavanila tao amin’ny Pavillon Analakely, mety ho diso fanantenana tanteraka ihany koa saingy izao ilay mpivarotra nihevitra ho nahazo tombony tamin’ny fametsifetsena sy fanambakana olona no tena ho voa mafy atsy ho atsy, satria tsy hisy hividy lavanila ao amin’ny Pavillon Analakely intsony.
Izay no ilazana eto ombieny manao hoe: “ilay toe-tsaina mihitsy no mila miova e! Tsy hisy hahavita miracle zany eto raha mbola toe-tsaina “fôpla” tahaka izao no hahazo vahana eto amin’ity firenena ity”.